Wasiiradii hore ee dhulka oo sheegtay In ay u tarmami doonto xilka gavanatoore doorashada soo socoto – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiiradii hore ee dhulka oo sheegtay In ay u tarmami doonto xilka gavanatoore doorashada soo socoto
Wasiiradii hore ee dhulka haweeneyda lagu magacaabo Charity Ngilu ayaa ka dhawaajisay in ay u tartami doonto xilka gavanatoore ee doorashada la filayaa in ay dalka ka dhacdo sanadka fooda inagu so hayo ee 2017.
Haweenydan oo ah madaxa xisbiga NARK ayaa shegtay in xilkaasi ay ooga tartami doonto Countiga Kitui oo ay kasoo jeedo.
Xilli ay ka hadleysay mid kamid ah televishanada dalka ayaa Ngilu shegtay in tan iyo markii ay baneeysay xafiiskii ay dowlada u haysay 2015-kii ay bilawday sidii ay u xoojin laheed xibigeeda NARK si meel uu oga soo baxo doorashada guud.
Wasiiradii hore ee dhulka ayaa shegtay in ay dib ugu laabatay dadka deegankeeda si ay ooga ogaato arimaha ay ka cabanayaan oo ay doonayaan in wax laga qabto sida biyaha, cunadda, caafimadka iyo doorka haweenka.
Madaxa xidibgaasi NARC ayaa intaa kudartay in ay isticmali doonto xisbigeeda xiliga ay u tartameyso doorashada waxayna dhanka kale mar wax laga weydiyay in xisbigeeda uu kubiirayo isbahaysida kale ayaa waxay shegtay in hadda ay xilli hore tahay in arimahaasi laga hadlo.
Ngilu oo hadalkeeda sii wadatay ayaa intaa kudartay in dowalada Jubillee ay intabadan qabatay waxyaabihii ay horay u balan qaaday kenyanka balse waxay kunux nuxsatay in wali dadka ku dhaqan miyiga ay la kulamayaan dhibayooyon dhinaca nolasha ah loona baahan yahay in wax laga qabto.
Ugu dambeyn mar ay ka hadleysay Isbahaysiga Cord iyo Hgaamiyaha Isbahaysigaasi ayaa waxay shegtay in uu Ra’iisul wasaarihi hore ee dalka uu hayo shaqo wanagsan maadama uu isha kuhayo dhaqdhaqaaqa tilaabooyinka dowlada.
Charity Ngilu ayaa xilka wasaarada dhulka baneeysay kadib markii lagu eedeeeyaa arimo musu maasuq iyadoo dacwada arintaasi la xiriirtana ay taala maxkamada islamarkaana laga dhursugayo in ay goan ka garto.
← Saraakiisha gudiga EACC oo baarlamaanka laga ceyriyay
Tiro arday ah oo waaga ugu baryay saldhig boolis kadib markii scholkooda uu dab qabsaday →